Zhejiang Estar စက်မှု Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Zhejiang Feiyu Automation နည်းပညာကုမ္ပဏီ Ltd.was 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအခြေခံပြီး bearing ထုတ်ကုန်လျှော၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ 20 ကျော်လက်ရှိနည်းပညာ R & D ပုဂ္ဂိုလ်များ, ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း, သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်း, ရေထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရေအားလျှပ်စစ်, စက်ယန္တရား 30 ကျော်မှတ်တိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြ, ပြည်တွင်း bearing စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးအခြို့သောဂုဏ်သတင်းကိုခံစားနေသည် ထုတ်လုပ်သူ။
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ Co. , estar Zhejiang, Ltd ။ သေ ချ. သေဆုံး, ကိုယ်ပိုင်ချောဘုရှ်၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ, ရေနံ sintered ဘုရှ်, syn လက်စွပ်နှင့် PTFE pad ပါထိုး bearing စောင်း ချ. သေဆုံးလျက်ရှိသည်။
နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီရဲရငျ့စှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ရှိလုပ်ငန်းများ။ မူရင်းအခွက်၏လေ့ကျင့်ရေးခိုင်ခံ့စေ၏အခြေခံတွင်ကုမ္ပဏီကျယ်ကျယ်လူမှုအထက်တန်းလွှာစုဆောင်းလေ့ကျင့်, အပြည့်အဝခေတ်သစ်စီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားနှင့်အသစ်သောစျေးကွက်မဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော, နှင့် Self-ချော bearing စက်မှုလုပ်ငန်းများရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသူ့ဟာသူမွှုပျနှံမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစနစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံဖို့ကြိုးပမ်း။ ၎င်း၏အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ကုမ္ပဏီ "အရည်အသွေးပထမဦးစွာခရက်ဒစ်ပထမဦးစွာနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးမှု" နှင့်၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များ၏အရည်အသွေးမူဝါဒအပေါ်အခြေခံတဲ့ပြည့်စုံ (ISO9001 က ISO / TS16949) အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အထူထောင်ထားပြီးရေခြားမြေခြားအလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်အဆင့်မြင့်ရောက်ရှိပါပြီ အဆင့်။ Jiangsu အတွက်လူသိများတဲ့ဝက်ဝံစက်မှုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတစုံတပါးကဲ့သို့, Zhejiang, Jiashan Feiyu တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်စက်မှုဇုန် layout ကိုရှိပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ကတည်းကကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအမြည်းအပြင်အသစ်ထုတ်ကုန်များစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းများများ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုမြှင့်တင်ရန်ထုတ်ကုန်တီထွင်ရန်စီမံကိန်းကိုဦးဆောင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, စျေးကွက်စူးစမ်းဖို့ ပို. ပို. ကွဲပြားခြားနားဖောက်သည်, အရည်အသွေးမြင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆက်လက်နှင့်တက်ကြွစွာနိုင်ငံခြားစျေးကွက်နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ချဲ့ထွင်။ ကုန်ပစ္စည်းများထက်ပိုနိုင်ငံပေါင်း 20 နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများထက်အနောက်တိုင်းဥရောပ, အမေရိကတိုက်နှင့်အရှေ့တောင်အာရှတင်ပို့နေကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထပ်မံသည်အလျားလိုက်စက်မှုလုပ်ငန်းမဟာမိတ်တိုးချဲ့စကေး၏စီးပွားရေးဖန်တီးအပြည့်အဝအသစ်လယ်ကွင်းကိုဖွင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်အားသာချက်များကိုအသာပုတ်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမဟာဗျူဟာမြောက်ရည်ရွယ်ချက်များနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း, အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတောက်ပသောအနာဂတ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။